Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha DL-Malic Acid | Bohua
CAS Maya: 97-67-6
Magacyada Kale: Malic
EINECS Maya: 202-601-5
FEMA Maya: Malic
Nooca: Xakameeyayaasha Aashitada
Lambarka Tusaalaha: 20200508
Magaca Product: Malic
Foomka: Foomka budada
Kaydinta: Kaydinta Qallalan ee Qabow
Malic acid waa unug dabiici ah oo leh qaaciddada molecular C4H6O5. Waxay ka qayb qaadataa dhadhanka dhadhanka macaan ee miraha, waxaana loo adeegsadaa sidii cuntada lagu daro. Malic acid waxay leedahay laba qaab oo stereoisomeric (L- iyo D-enantiomers), inkasta oo kaliya L-isomer si dabiici ah u jiro.
Malic Acid wuxuu leeyahay hygroscopic xoog leh, ku milmi kara biyaha iyo ethanol. Waxaa jira aashito macaan oo gaar ah.
Dhadhanka Macalic Acid wuxuu u dhow yahay tufaaxa dabiiciga ah ee dhanaan, marka la barbardhigo citric acid, leh aashitada, dhadhanka iyo jilicsanaanta, waqtiga deganaanshaha dheer, iwm, ayaa si weyn loogu adeegsaday cabbitaan heer sare ah, cunto iyo warshado kale.
2.Malic Acid, wareegga citric acid wuxuu dhexdhexaadiyaa noolaha, wuxuu ka qaybqaadan karaa geedi socodka halsano ee jeermisyada waxaa loo isticmaali karaa ilaha kaarboonka koritaanka microbial, sidaa darteedna waxaa loo adeegsan karaa wakiilka halsano cuntada. Khamiir ayaa la samayn karaa tusaale ahaan wakiilka kobcinta kobcinta ayaa sidoo kale lagu dari karaa caanaha la qallajiyey.
3.Malic Acid waxay soo saari kartaa saamayn jel pectin, waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo keega midhaha, macaanka iyo jelly jelly state purees, iwm.
(1) Warshadaha cuntada: waxaa loo adeegsan karaa farsamaynta iyo isku -darka cabbitaanka, khamriga, casiirka miraha iyo soo -saaridda nacnaca iyo macaanka iwm. Waxa kale oo ay leedahay saamayn bakteeriyada xannibaadda iyo jeermis -diidka waxayna ka saari kartaa tartrate inta lagu jiro khamriga.
(2) Warshadaha tubaakada: soosaarka malic acid (sida esters) ayaa hagaajin kara udugga tubaakada.
(3) Warshadaha dawooyinka: troches iyo sharoobada oo lagu daray malic acid waxay leeyihiin dhadhan miro waxayna fududeyn karaan nuugitaankooda iyo faafinta jirka.
(4) Warshadaha kiimikada ee maalinlaha ah: sida wakiil adag oo adag, waxaa loo adeegsan karaa caanaha dawada ilkaha, qaacidooyinka isku -darka uunsiga iyo wixii la mid ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa maaddooyinka carfiska iyo saabuunta. Sida cuntada lagu daro, malic acid waa cunnada daruuriga u ah sahaydeena cuntada. Sida hormuudka cuntada lagu daro iyo alaab -qeybiyeha cuntada ee Shiinaha, waxaan ku siin karnaa malic tayo sare leh.
Muuqaal Caddaan ama caddaan ku dhow, budada crystalline ama granules oo leh dhadhan aashito xoog leh
Baaritaan (sida C4H6O5) 99.0%~ 100.5%
Magaca Kiimikada DL-hydroxy butanedioic acid
Acid Fumaric 1.0%Max
Acid Maleic 0.05%Max
Biyaha aan milmin 0.1%Max
FULIN WEYN IYO UJEEDO DL-Malic acid waxaa loo adeegsan karaa sida aashitada cabitaannada qabow (oo ay ku jiraan cabitaannada lactobacillus, cabbitaannada caanaha, cabbitaannada kaarboon, kola), cuntooyinka barafoobay (oo ay ku jiraan sherbet iyo jalaatada), cuntooyinka la warshadeeyay (oo ay ku jiraan khamri iyo majones). Waxaa loo isticmaalaa sidii ilaaliyaha midabka iyo jeermis dilaha. Waxa kale oo loo adeegsadaa sidii dejiye emulsion oo ah ukunta ukunta. DL-Malic acid sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa dhexdhexaad ahaan dawooyinka, qurxinta, biyo raaci, nadiifiyaha birta, wakiilka kaydinta, dib-u-dhiska warshadaha dharka, wakiilka cad-cad ee dhalada polyester-ka.
Hoggaamiya 2mg/kg Max
Kaydinta Si hawo leh u ilaali meel aan iftiin lahayn, qallalan oo qabow.
Xirxirida 25KG shabaq Kraft/bacda caaga ah oo lagu daboolay bacda PE, 17MT/20FCL (sariirta dul saaran) ama 19MT/20FCL (sariir la'aan).
Bandhigga sawirka warshadda
Sawirka sawirka saadka
Hore: Citric Acid Monohydrate/Citric Acid Biyaha
Xiga: Acid Fumaric
Dl -Micic -malic